Sawirro: Wasiirka Amniga Iyo Gudoomiye Taabid oo saaka dib u furay waddo sababo amni u xirneyd Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Wasiirka Amniga Iyo Gudoomiye Taabid oo saaka dib u furay waddo...
Sawirro: Wasiirka Amniga Iyo Gudoomiye Taabid oo saaka dib u furay waddo sababo amni u xirneyd Muqdisho
Wasaarada Amniga gudaha iyo Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleestay in dib loo furo Wado muhiim ah oo kutaala magaalada Muqdisho Wadadan oo sanadihii lasoo dhaafay u xirneed arimo dhinaca amaanka ah.
Wadada la furay ayaa ah mida hormarta Guriga Shaqaalaha iskuna xirta Laamiyada Maka Al Mukarama iyo kan Wadnaha , waxaana wadana dhawaan lagu sameeyay dib u dhis iyadoona la saaray laami cusub.
Wasiirka Amniga Gudaha Maxamed Abuukar Islow iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo tagay wadadan la furayay ayaa shaaciyay in hada waxii ka dambeeya ay furan tahay wadadaasi ayna dadku isticmaali karaan.
Wadadan oo ah mid Muhiim ah tagtana Isgooska KPP ayaa waxa ay u xirneed mudo sanado ah Hay’ada Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo degan Gurriga Shaqaalaha, waxaana dib u furista wadadan soo dhaweeyay shacabka Muqdisho.
Waddan waxaa horey u dhisay xarigana ugu jaray Madaxweynahii Hore Somalia Xasan Sheekh Maxamuud,